Blockchain News 30 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 30, 2018 arun
Cryptocurrency Exchange kuti varege bhuroka bhizimisi nevanhu German regulator
German Financial Supervisory Authority (BaFin) akarayira Crypto.exchange GmbH, mumwe Berlin anotsanangura Exchange, kuti pakarepo kumisa achiita somunhu bhuroka zvemari.
The murayiro wakapiwa pashure exchange kuzoona website yayo, btc-now.de, kuti aizodzitengesera mutengi kuti BitCoins kuti Maeuro nezviratidzo kuvatengesera ari Stock Exchange, anoti BaFin mu mutsara. The makasimba kwakauraya kuritenga mutengo vaizodzorerwa hwakatamisirwa vanoita mukati 30 maminitsi, inowedzera.
Maererano BaFin, mari komisheni bhizimisi wakashanda kubudikidza Crypto.exchange GmbH haana rinobvumirwa regulator. The zvemari Gwaro akatora chisarudzo pashure vanoshandisa vaizviti kuti havana kugamuchira chero mari cryptocurrency kuti hwakatamisirwa akasimba, Bloomberg inoti.
Sberbank kuti chikamu Swiss kuchaita mugotenga cryptocurrency
The chikamu maumbirwo Sberbank kuSwitzerland ari kugadzirira kutanga wokuita zvemusika cryptocurrency kuti vatengi, akati Andrei Shemetov, mutevedzeri womutungamiriri Sberbank uye musoro kumisika yose nokuda inivhesitimendi – Sberbank CIB. Iyi ndiyo nguva yokutanga basa iri mhando ari inopiwa mabhanga Russian.
“The chigadzirwa kune njodzi zvikuru, ari volatility riri guru kwazvo, saka isu hatingazvirumbidzi dzinoita mabasa aya kuti navanopinda guru makasitoma… Tiri kugadzirira yose kwezvivako kuti kutanga kupa rubatsiro mukati chikamu Swiss… Tiri kuvaka zvizere zvokutengeserana setup zvekuti tinogona vaviri kuvhura nzvimbo yedu uye zvinopa mutengi mabasa, ndiko, kutenga nokutengesa kuti vatengi.”
Samsung akatanga kugadzirwa danho kuti ASIC Chips kuti cryptocurrency mugodhi
The Bell (Korean nhau Website) anoshuma kuti Samsung ave akatanga kubudisa Chips nokuda Bitcoin mugodhi uyu mwedzi.
Mushumo anoti Samsung akanga chibvumirano ane Chinese Hardware kambani ukama Bitcoin mugodhi, uye vakatanga kugadzirwa kare pamusoro Chips – achitaura chinhu zvinowanikwa zvinosanganisira Samsung mukuru.
Asiwo anoenderera mberi achiti kuti Samsung akanga apedza kugadzira ASIC semiconductors nokuda Bitcoin mugodhi rapera.
Bitcoin runopfuura Go ...
Previous Post:Blockchain News 29 Ndira 2018
Next Post:Kuva blockchain yokuvaka